Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 3t l1312 lah
Lesona 13 : Mihazona ny fiangonana ho mahatoky
22 - 28 Septambra 2012
Mahatoky noho ny safidin'Andriamanitra (2Tes 2.13-17)
Alahady 23 Sept.
Mampahatsiahy ny vavaka tao amin’ny fanombohan’ny 1 Tesalônianina ny teny ampiasaina ato amin’ity fizaràna ity. Toy ny hoe niverina tany amin’ny fanombohana mihitsy i Paoly, namorona fehin-kevitra araka ny tokony ho izy ho an’ireo taratasiny anankiroa. Maneho ny fahasahiranantsainy i Paoly eto, dia ny tsy hivilian’ny mpino tao Tesalônika hiala amin’ny lalana efa nitondrany azy ireo.
Vakio ny 2 Tes. 2:13-17. Inona no antony isaoran’i Paoly an’Andriamanitra noho ny amin’ny Tesalônianina? Inona no asainy ataon’izy ireo ao amin’io andalan-teny io? Nahoana ireo teny ireo no sahaza ho antsika koa amin’izao fotoana izao, amin’izao efa maha-antomotra ny andro farany izao?
Ny fiainan’ny Tesalônianina dia porofo mazava ho an’i Paoly fa efa voafidy ho “santabokatra” (DIEM) hahazo famonjena izy ireo. Voafidy “hatramin’ny voalohany” no ilazan’ny dikan-teny sasantsasany azy. Na dia fanomezana aza ny famonjena, dia andraman’ny mpino amin’ny alalan’ny fanamasinan’ny Fanahy sy ny finoana ny fahamarinana kosa izany. Ny fiainan’ny mpino dia tsy fanandramana tsy ijereny afa-tsy ny tenany manokana fotsiny (‘expérience subjective’) fa mihoatra noho izany; miorina mafy tsara ao amin’ny fahamarinana mihitsy izany.
Izany no mahatonga an’i Paoly ho sahiran-tsaina mafy mba hihazonan’ny Tesalônianina ny foto-pinoana izay nampianarina azy ireo tamin’ny alalan’ny epistily na tamin’ny alalan’ny teny nambara. Matetika mantsy no votsotra tsy voatazon’ny olona ny fahamarinana rehefa mandeha ny fotoana, ka izany no antony tsy maintsy andraisantsika fampaherezana mandrakariva avy amin’ireo izay mitory sy mampianatra antsika.
Tamin’ireo vanim-potoana voalohandohany nijoroan’ny fiangonana, dia naleon’ny olona aza nampitaina am-bava ny hafatra toy izy nampitaina an-tsoratra. Vitsy kokoa mantsy ny fanolanana teny tonga ho azy tsy niniana eo amin’ny fampitana hafatra ambava. Mazava sy azo antoka kokoa ny hafatra ampitain’ny lantom-peo sy ny fihetsika toy izay ny hafatra ampitaina amin’ny alalan’ny teny voarakitra ao anaty takila anankiray. Izany no mahatonga ny fitorian-teny ho fomba fampitana hafatra tsy mbola lany andro hatramin’izao.
Ny hafatra voarakitra an-tsoratra, tahaka ny hafatra ao amin’ireo epistilin’i Paoly anefa, dia tsy ho azon’ireo te hanova ny filazantsara atao loatra ny minia manolana azy mba hahatanteraka ny fikendren’izy ireo manokana. Ny teny voasoratra dia ahafahana mizaha toetra amin’ny alalan’ny fitsipika azo antoka sy tsy azo ovàna ireo hafatra ambava ampitaina amin’ny alalan’ny toriteny. Noderaina manokana ny Berianina ao amin’ny bokin’ny Asan’ny Apôstôly satria nampiarahin’izy ireo ny fihainoana tsara ireo hafatra am-bava nampitaina taminy sy ny fandinihana amim-pitandremana ny Soratra Masina (Asa. 17:11).
Vakio indray ny andininy natokana hodinihina anio. Marobe tokoa ireo hery izay miezaka mandrakariva hanery antsika hiala amin’ny fahamarinana. Jereo ny fiovana nisy teo aminao nandritra izay fotoana lasa rehetra izay. Moa ve ireo fiovana ireo maneho fandrosoana miandalana, tsy miovaova, mankamin’ny fahamarinana, sa maneho fanalavirana miandalana, tsy isalasalana, ny fahamarinana? Raha hazavaina misimisy kokoa dia hoe mizotra mankaiza ny fiainanao?